कांग्रेस नगर अधिवेशन : घोराही नगरसभापतिमा पाण्डे र रावत आकांक्षी - Goraksha Online
दाङ, २८ भदौ । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत वडा र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै दाङमा अब नगर अधिवेशनको चर्चा सुरु भएको छ । आगामी असोज ९ गतेका लागि तय भएको गाउँ÷नगर अधिवेशनमा जिल्ला सदरमुकाम रहेको घोराही उपमहानगरपालिकामा नगर सभापतिको नेतृत्व लिन दुई युवा नेताहरु नगर सभापतिको आकांक्षी देखिएका छन् ।
निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै युवा नेताहरुले आफ्नो पक्षमा मत माग्न क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुसँगको भेटघाटलाई तीब्र पारेका छन् । नगर अधिवेशनमा घोराही नगर सभापतिका लागि आकांक्षी युवा नेता रमेश पाण्डे र तिलक रावतबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । दुवै आकांक्षी फरक–फरक समयको अन्तरालमा विद्यार्थी राजनीतिबाटै माथि आएका हुन् । नगर सभापतिका प्रत्यासी रमेश पाण्डे नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षको राजनीतिमा जोडिएका नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।
पाण्डेको उम्मेदवारीलाई पूर्व जिल्ला सभापति वीरकेशरी गौतम र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अनिता देवकोटा खेमाको समर्थन रहेको बताइएको छ । यद्यपि उनले आफूलाइ नेपाली कांग्रेसको नगर सभापतिका रुपमा मात्र उभ्याएको बताइन्छ । नेपाली कांग्रेसको घोराही नगर सभातिका आकांक्षीमध्येका एक हुन्, रमेश पाण्डे । नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गरेका पाण्डे घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ का वडा अध्यक्षसमेत हुन् । घोराहीमा रहेको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनका क्रममा २०५० देखि नेपाल विद्यार्थीको राजनीतिमा प्रवेश गरेका पाण्डले २०२९ असार १५ गते बुबा जीवराज पाण्डे र आमा बालिका पाण्डेको सन्तानका रुपमा घोराहीमा जन्मिएका हुन् ।
पारिवारिकरुपमा राजनीतिमा फरक पृष्ठभूमि भए पनि पाण्डे सानैदेखि नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध भएर राजनीतिमा संलग्न भएका हुन् । लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय उनी युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय, पार्टीप्रति इमान्दार एवं स्पष्ट बक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । त्यही स्वभावका कारण स्थानीय चुनावमा वडा अध्यक्षका रुपमा निर्वाचित भएको बताइन्छ । विद्यार्थी राजनीतिमा लामो समय सक्रिय भए पनि उनी पदीय जिम्मेवारीका रुपमा भने उनी नेपाल विद्यार्थी संघको जिल्ला सदस्यका रुपमा मात्र काम गरेर काम गरेको बताउँछन् ।
‘लामो समयदेखि राजनीतिमा लागे पनि पदीय हिसावले कमै जिम्मेवारीमा बसेको छु’, उनले भने, ‘तर पदीय जिम्मेवारीमा नभए पनि नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाली कांग्रेसको लागि निरन्तररुपमा खटेर काम गर्दै आएको छु ।’ उनले विद्यार्थी राजनीतिका क्रममा २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । विद्यार्थी राजनीतिका क्रममा नेपाल विद्यार्थी संघको जिल्ला सभापतिको दौडमा रहे पनि सभापति भन्ने बन्न सकेनन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको ठूलो जनसंख्या भएको वडामा वडा अध्यक्षका रुपमा निर्वाचित पाण्डे नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा भने नगर सभापतिमा पराजित भएका थिए । करिब ६ बर्षपछि पुनः १४औँ महाधिवेशनमा नगर सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेको उनले बताए । तीन दशक लामो विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय उनलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्ने इच्छा भएको बताए ।
‘लामो समय विद्यार्थी राजनीतिमा काम गरे, अब पार्टीको राजनीतिमा आएर काम गर्ने सोचमा छु’, पाण्डेले भने– ‘विद्यार्थी राजनीतिमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ, त्यो अनुभव देखाउने ठाउँका रुपमा मैले नगर सभापतिमा आफूलाई योग्य ठानेको छु ।’ त्यसका लागि आफू निकटका साथीहरुसँगै जिल्लाका कांग्रेसका अग्रज नेताहरुसँग समेत छलफल भइरहेको बताए । गुटभन्दा पनि पार्टीलाई सशक्त, संगठित र गतिशील बनाउनका लागि नगरसभापति बन्न चाहेको बताए ।
नगर सभापतिकै अर्का आकांक्षी हुन्, तिलक रावत । वि.सं. २०४८ सालमा जन्मिएका रावत कलिलो उमेरमै पारिवारिक राजनीतिका कारण सक्रिय राजनीतिमा जोडिन पुगे । उनको परिवार नै नेपाली कांग्रेसमा आस्था राख्ने सक्रिय परिवार थियो । तिलकका बुवा अर्जुन रावत वि.सं. २०५४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा रोल्पा जिल्लाको साविक दुविडाँडा गाविसको वडाध्यक्षमा उम्मेदवार समेत बनेका थिए, यद्यपि विजयी बन्न सकेनन् । त्यही बेलादेखि नै कांग्रेसको तोतेबोली बोल्ने तिलक वि.सं. २०६२÷२०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा सक्रिय भएरै लागे । जुनबेला उनी १५ बर्षका मात्रै थिए ।
द्वन्द्वकालमै माओवादीबाट उनको परिवार विस्थापित भएर घोराही झ¥यो । तात्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा रोल्पामा सक्रिय राजनीति गर्दै आएका रावत परिवार माओवादीकै कारण विस्थापित भएर दाङ आएको बताइन्छ । रावत पनि आफ्नो परिवारलाई राजनीतिक द्वन्द्वपीडितको परिवारका रुपमा प्रस्ट्याउँछन् । घोराहीको रतनपुरमा बसोबास गर्दै आएसँगै तिलकले नेपाल विद्यार्थी संघको सक्रिय राजनीति वि.सं. २०६३ सालमा थाले । त्यो बर्ष उनी पद्मोदय पव्लिक माविको इकाई सचिवको भूमिकामा काम गरे । त्यसपछि वि.सं. २०६५ सालमा दीपशिखा स्कुलमा अध्ययन गर्दागर्दै त्यहाँको पनि इकाई सचिव भए । वि.सं. २०६९ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको क्षेत्रीय सभापतिको भूमिकामा जोडिए ।
नेविसंघको जिल्ला सभापतिकै आकांक्षीका रुपमा समेत कुनैवेला प्रस्तुत भएका रावत अहिले नगर सभापतिको प्रत्यासी बन्नु युवाहरुका लागि आफैमा गौरवको विषय भएको पनि युवा राजनीतिक बृत्तमा चर्चा चलेको छ । नेपाल विद्यार्थी संघको लामो समयदेखि अधिवेशन नै हुन नसक्दा रावतजस्ता धेरै विद्यार्थी नेताहरुलाई अब कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा आउनुको कुनै विकल्प छैन । विद्यार्थी राजनीतिमै सक्रिय रहँदा उनी काठमाडौँमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि पटक–पटक प्रहरीको कुटाईबाट घाइतेसमेत भएका थिए ।
राजनीतिसँगै खेल क्षेत्रसँग पनि जोडिएका रावत वि.सं. २०७२ सालमा दाङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सदस्यका रुपमा पनि मनोनीत भएका थिए । विद्यार्थी राजनीतिकै क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको राजनीतिक छाप परेका रावतलाई नगर सभापतिका लागि क्षेत्रीय सभापति भूपबहादुर खड्का र राजु खनालको समर्थन रहेको बताइन्छ ।